नेपालीको भोट देखेर तर्सियो मिस वर्ल्ड, भोटिङ् म्याद थप्यो अझै दुइ दिन, कसको भोट कति ? (भिडियो) – PathivaraOnline
Home > समाचार > नेपालीको भोट देखेर तर्सियो मिस वर्ल्ड, भोटिङ् म्याद थप्यो अझै दुइ दिन, कसको भोट कति ? (भिडियो)
काठमाडौं । चीनको सान्यामा जारी मिस वर्ल्ड २०१८ प्रतियोगिताको लागि भोटिङ गर्ने आज अन्तिम दिन भनिएको थियो तर नेपालीको भोटले तर्सेका मिस वर्ल्डले अझै दुइ दिन म्याद थपेको छ । ‘मिस नेपाल २०१८’ को ताज पहिरेकी श्रृङ्खला खतिवडा अहिले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै चीनमा भइरहेको ६८ औं ‘मिस वल्र्ड’मा सहभागी छिन्।
मिस वर्ल्ड २०१८ अन्तरगत मल्टिमिडिया अवार्डमा नेपालकी सुन्दरी खतिवडाको दावेदारी बलियो बनिरहेको छ ।उनले प्रतियोगीतामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आइरहेकी छिन्। २३ वर्षीय श्रृङ्खला प्रतियोगीताको सेमीफाइनलमा प्रवेश गरिसकेकी छिन्।
अहिलेसम्म कसको मत कति प्रतिशत ? हेर्नुस यो ताजा रिपोर्ट:
पछिल्लो स्थितिमा श्रृंखला करिब ३५ प्रतिशत भोटका साथ अग्रता कायम गरिरहेकी छन् । आज कुनै ठूलो उलटफेर भएन भने श्रृंखला मल्टिमिडिया अवार्डको हकदार बन्न सक्छिन् ।मिस वल्र्डमा नेपालले सँधै सहभागिता जनाए पनि अहिलेसम्म उपाधि हात पार्न भने सकेको छैन। अहिले मिस नेपाल खतिवडाबाट धेरैले आश गरेका छन्।
उनले प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै विश्वको नजर आफूतिर तानेकी छिन्। त्यसैले पनि धेरैले ‘मिस वल्र्ड’को उपाधि मिस नेपाल खतिवडाले पहिरिने विश्वास गरेका छन्। उनी अहिलेसम्मको भोटिङ हेर्दा पनि सबैभन्दा अग्रपंतिमा छिन्। विश्व सुन्दरी प्रतियोगितामा सहभागि हुने क्रममा उनले आफ्नो परिचयात्मक भिडियोमा नेपालको सुन्दरता प्रदर्शन गर्दै विश्वको ध्यान आफूतिर तानेकी थिइन्। उनलाई देश तथा विदेशमा बसेका नेपालीहरुले निकै नै साथ दिइरहेका छन्।
१ सय २१ जनाको सहभागिता रहेको प्रतियोगितामा अब ३० जना मात्रै बाँकी छन्। खतिवडालाई हौसला प्रदान गर्न यसरी भोटिङ गर्न सकिन्छ ।
यी ३ वटा बाहेक अन्य सबै एकाउन्ट पेजहरु नक्कली हुन, यी तीनमध्ये जुनै बाट पनि भोट गर्न सकिन्छ।
माथि दिएको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस जुन जुन पेज खुल्छ त्यो बाहेक अरु सबै फेक एकाउन्ट हुन सेयर गरेर सहयोग गर्नुहोला ।